Coffee kungenzeka kube ukuqabuleka ethandwa kakhulu kule planethi. Latest ucwaningo okubonakalisa le mali cishe ngeke ugcine bamanga ezinye izizwe eziningana kanye nokuthi ngaphezu 50% labantu US kukhona ikhofi abaphuza. Lokhu mkhulu kunanoma iyiphi udaba kusiza more ngempela ukuchaza kungani a okuhlukahlukene kangaka coffeemakers kungathengwa namuhla.
With onjalo uxhaxha ezihlukahlukene kumadivayisi caffeine, kukhona okunye more for yakho umphakathi ikhofi-ukuphuza kunanini ngaphambili. Main-stream izitayela ezidumile kukhona Thola Manual futhi okuzenzakalelayo, Pod Espresso Percolator Coffee kanye Cleaner. Ngamunye lezi izitayela has isici eziningana kuphela aqinisekisiwe ukuheha yengxenye ethile ikhofi-ukuphuza umphakathi.
The coffee stovetop espresso abawenzayo ngokuyisisekelo indlela guide ngokulungiselela espresso caffeine once ungatholi i supply kagesi amandla noma ukufinyelela i edition othomathikhi. Lokhu kwenza ukuthi kube ikhofi machine ephelele ukuthatha ngaphandle Angling noma Backpacking kuvakasha kufanele uzizwe isidingo sokunyathelisa i-espresso walk. Ekuqaleni amanzi ibekwa ematheni kubhayela futhi emva ukuthi kukhona lemifanekiso Isigaxa etholakala ngaphakathi kwesithando somlilo igcwele izizathu espresso. Landelayo ngempumelelo kakhulu kancane some kanye nomenzi wawo endaweni phezu resource lokushisa. From ukushisa sipho, emva phezulu somlilo lugcwele ikhofi asanda ukwenziwa it isuswe emva kokuba umbhangqwana imizuzu kanye espresso ulungiselela ukuba inikelwe. Ngezansi aphinde, ukungabi yimuphi sici ukufudumala ubonisa the caffeine has ukusizwa ngokushesha.
Automated and Manual Ukuconsa Coffee Machines
Uhlobo Coffee umenzi athandwa kakhulu namanje coffeemaker othomathikhi-drip. The layout kubalulekile ukuthi elibona nxazonke neze futhi ithele. Engeza amanzi fresh for the ithangi esakhelwe, faka filtration singene ewusizo ukusefa umnikazi, ukunquma ekhethiwe ikhofi izizathu zakho bese ugcwalisa ku ukusefa ke bacindezela inkinobho isiqalo. Emizuzwini embalwa imizwa zakho ezazivuswa iphunga caffeine asanda ukwenziwa eshisayo! Designs abaningi futhi ube esakhelwe timer plus a ibhokisi onomoya omnene ehileleke kangako ungazibekela espresso yakho ikhofi bese isethwe ngasiphi hr of sasebusuku noma ntambama, futhi wayeqhubeka hhayi ngokungaguquki kuphole too.
Ulwazi ukuvuza ikhofi imishini unawo kancane more enze ngoba une ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa emanzini usebenzisa enye umthombo afudumele, kodwa emva kwalokho kuyinto efanayo inqubo ikhofi wokwenza ukuthola java izizathu ngaphakathi lemifanekiso nokulungiselela amanzi ashisayo ngokusebenzisa ukusefa ngakho uketshezi caffeine uyabuthwa ngaphakathi ebhokisini noma ebhokisini elingezansi ngokuyisisekelo. Omunye kwempahla okuhle kusiza of the machine ikhofi handbook imidlalo Kuyaphawuleka ukuthi lapho nawe ungase uthole kakhulu yimuphi ngoba kuthonywa kokuba ugesi ukusebenzisa ngakho mkhulu for amatende nezinye izinto eziphishekelwayo ongaphandle.
Abakhiqizi coffee Java usukhulile ukuba okuningi ezingabizi eminyakeni ukuthi kukhona yamuva futhi ngenxa yalesi, uqamba asathuthuka phakathi eside abasebenzisi ikhofi befuna yini okungaphezu nje ukuhambahamba standard in ukwamukelwa. Kunamagatsha izinhlobo eziningana ikhofi espresso izinhlelo ukukhetha kusuka, ultra automatic futhi ngokwengxenye okungukuthi automatic. The kancane kufanele ukwenze ukuze uthuthuva java yakho, njengoba rule, ezengeziwe othomathikhi umenzi java kuba, kodwa ngokudabukisayo the priced ephakeme ukuthenga. Njengoba isibonelo, lapho a model semiautomatic angase tamp emagcekeni ikhofi, uthuthuva the caffeine, Indebe yakho ukulayisha bese khipha ngezizathu elidala, umkhiqizo okuzenzakalelayo ngokuphelele futhi may isimiso ikhofi kuwe aswell, kanye super othomathikhi ikhofi espresso umenzi ungenza konke okungenhla Ukwedlula benezincwadi wanezela izici ezifana amanzi Ngokwesibonelo esakhelwe okusefa ekhaya-yokuhlanza.
Lezi njengamanje beba stylish kakhulu futhi ethandwa eminyakeni yamuva. Ukusebenza like nje ukuvuza ukuthi imishini ekwazi ukuzilawula, Base ihlanganisa ikwazi ukusebenzisa canisters prepackaged of okukhethekile zekhofi ukuba yenza espresso ukuthi lokudla okumnandi. Ukusebenzisa eminingi elihle ikhofi chains ezifana Starbucks manje ukuthengisa kwabo ezishisayo ikhofi luhlanganisa in the pod format, amakhasimende angakwazi ukuthola ngokunembile imbiza yokunambitha efanayo java ezikhethekile ekhaya kwakufanele amabombo out futhi athenge ngaphambi in a value ephakeme.
French Press Coffee-uMenzi
Futhi ngokuthi “qhafaza izimbiza” noma ” plunger amabhodwe “, the Press coffeemakers ukuthi kukhona French njengoba ezingavamile, lapho esedlule. Espresso Ukuhlela Ngaphezu usebenza kunalokho ngikwazi ekusebenziseni noma yiziphi ikhofi-abenzi ngoba kuba bhukulwazi ikhofi umenzi kakade kubuyekezwe. The pan Ngempela pipe glass iqukethe, Mesh plunger ukuthi imisebenzi efana isibonelo a ukusefa. Ukuze asize wenze ikhofi izizathu ikhofi kumele kwekucala kukalwa kini enyuselwa pan, Gcwalisa next emanzini cishe abilayo. The plunger kamuva sicindezelwe phansi kanye isiphuzo uketshezi is ngenkani Indebe ukulinda noma ebhodweni, ngemuva Ngokuvumela lenhlanganisela java to emaweni for a zikhathi couple. Njengoba kukhona inombolo ebalulekile bafudumale factor noma amazinyo ngaphansi iphakethe java, wena usifake esitsheni ezimboziwe ukuligcina hot for ngasemuva noma kudingeka basize isiphuzo caffeine kweso.
Khona manjalo percolator coffeemakers kwakukhona uhlobo ejwayelekile ikhofi abawenzayo emakhaya amaningi, umsebenzi Manje kusukela kumadivayisi ukuvuza ezazingaphansi automatic. Bathi nokho athole isikhundla sabo noma nini ikhofi-umenzi kuyadingeka ukuthi angenza izinhlu enkulu java ukuphikisana 10-14 Umkhawulo Indebe noma ngaphansi ngesikhathi hhayi njengoba owaziwa namuhla. Percolators Modern kungatholakala ngokuthi izitayela top electronic and isitofu azosethwa like okuzenzakalelayo ikhofi imishini ukuthi kukhona eyengeziwe. Nakuba amanzi abilisiwe, the coffee making indlela kusekelwe amanzi zokusebenzisa njalo phezu izizathu ikhofi, ibekwe nje isisefo sensimbi. Omunye Ububi inqubo ukuthi espresso ngokuvamile uthola obuqinile futhi okubaba zinambitha eside liqhubeke umjikelezo ekudaleni.
Mhlawumbe ukucinga ifomu oddest ikhofi-machine kuyoba umshini coffee machine. Efuna kusukela video isayensi-eqanjiwe like into, idivayisi liqukethe ezimbili iziqukathi isixhumanisi ngendlela tubing USiphon. The filtration lakhiwe engxenyeni phansi imbiza esasingcwele upper. Umuntu waqale inikeza yesibili esitsheni futhi coffee ingxabano, next asibekela amanzi esitsheni ekuncipheni, ukuba yenza espresso. Lapho amanzi abilisiwe kamuva elilandelayo umenzi efakwa kanye futhi ngentukuthelo ophela kuba ngilambatha kuhlangene ngokusebenzisa tube ku embizeni phezulu. Ngemuva mayelana 3 imizuzu ibhodwe ethathwa ukushisa supply kanye umusi uba emuva emanzini amanzi iphoqelekile ngokusebenzisa ukusefa futhi emuva model engezansi. Container Ones fresh of java manje ehlezi ngaphakathi ohlelweni ekuncipheni. Indlela ezithakazelisayo ukwenza-indebe noma isitsha of java!
Ngokwemvelo, ikhofi abathanda angakhetha Ukukhetha okubanzi ikhofi-abenzi. From isitofu ukuthi ezishibhile top ezitsheni espresso ekupheleni eliphezulu super imishini ikhofi ukuthi kukhona automatic, umshini ikhofi yonke isabelomali kanye nesifiso ngamunye. Media ukuthi amazing! Namuhla nangu izindaba ungakhululekile. Mhlawumbe ukuqonda isitayela uzuza akwanele, kanye nemishini eminingi java ukukhetha kusuka namuhla. Phakathi kwazo ngazinye models ikhofi machine eyaziwa ngenhla ziningi brand ehlukahlukene kanye izinguqulo ukukhetha kusuka.
Ngenhlanhla Internet ikunikeza isixazululo empeleni kuyazuzisa futhi sisheshe ukuthola lokho okwamanje atholakala ntengo. With a period kancane nokuphenya naso yokwakha Zikhipha udoti kusuka ikhofi abenzi yakho ukuthi zinkulu. Simply uthole online futhi uvakashele ikhofi nomenzi eziningana ahlaziye sites. Ngakho kufanele ucabangele lokho uhlole ngokuqapha, sicela ukhumbule ukuthi yilowo nalowo java nokuhlola umenzi sites ngokuvamile ziyehluka.